पर्वतका गणेश तिमिल्सिनाको नख्खु जेलदेखि राष्ट्रियसभा अध्यक्षसम्मको यात्रा
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकले गर्नेछ । तिमिल्सिनाको प्रस्तावकमा एमालेका खिमलाल भट्टराई र समर्थकमा माओवादीका दीनानाथ शर्मा र एमालेका सुमनराज प्याकुरेल छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा निर्वारोध बनेपछि तिमिल्सिनाले सभालाई सबैको साझा संस्था बनाउने बताएका छन् ।
को हुन तिमिल्सिना ?
तिमिल्सिना एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रदेश ४ को सहसंयोजक हुन् । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् ।
तिमिल्सनाले ओलीसँगै ४ बर्षे जेल जीवन बिताएका थिए । २०३६ सालमा रेडगार्डको सचिव बनेका उनले चार वर्षपछि पार्टीको सदस्यता पािए । २०४१ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सचिव भए ।
२०४२ को बम काण्डपछि तिमिल्सिनाले ४ बर्ष जेल परे । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०४२ देखि ०४६ सम्म लगातार ४ बर्ष तिमिल्सिनालाई पोखरा, भैरहवा, तौलिहवा, वीरगञ्ज, भऽगोल जेल र नख्खु जेलमा राखेको थियो ।
तिमिल्सिनासँगै जेलमा तत्कालीन कम्युनिष्ट नेताहरु केपी शर्मा ओली र हितकाजी गुरुङ थिए । २०४६ सालमा जेलबाट छुटेका उनी प्रजातन्त्र बहालीको आन्दोलनमा पुनः सक्रिय भए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेका तिमिल्सिनालाई तत्कालिन सरकारले पक्राउ गरी ल्याउन टाउकोको मुल्य ५० हजार तोकेको थियो ।
अर्ध भूमिगत अवस्थामा प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी बनेका तिमिल्सिना २०४७ सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको केन्ऽीय सदस्य भए । उनी केन्ऽीय सदस्य बन्दा ओली सोही कमिटीका अध्यक्ष थिए ।
२०४७ सालमा माले मुस्ताङ्गको सचिव, ०४८ मा एमाले बागलुङ्गको सचिव, २०५४ मा भएको एमालेको छैटौ महाधिबेशनबाट बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका तिमिल्सिना धौलागिरी अञ्चलको पार्टी इन्चार्ज बने ।
२०५९ सालमा जनकपुरमा भएको पार्टीको सातौं महाधिबेशनबाट केन्ऽीय सल्लाहकार बनेका उनी आठौं महाधिवेशनबाट केन्ऽीय सदस्य भए । तिमिल्सिनाले पर्वत जिल्ला संयोजकको रुपमा पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी पर्वतका जिविस सभापति पनि भएका थिए ।
पर्वत आर्थरका जनताले राहात पाएनन् : विद्यालयमा राखिएको चामाल कुहिए 164
आजदेखि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान गाडीको पास नपाइने 105
हेर्नुहोस् कस्तो छ त तपाईको आजको राशिफल ? 22
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय बिभागमा पर्वतका छ जना मनोनित 245
हेर्नुहोस् कस्तो छ त तपाईको आजको राशिफल ? 62
गत आबको बजेट सार्वजानिक गर्न माग तरुण दलको माग 204
कम्युनिष्टहरुले जनतालाई बाँडेका सपनाहरु बालुवाको घरजस्तै भत्किने –केन्द्रिय सदस्य जोशी 1716
तरुणदलको प्रदेशस्तरिय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्वतमा सम्पन्न 2239
नेपाल तरुण दलको प्रदेश ४ को भेला पर्वतमा ,तयारी तिव्र 1253
नेपाल निजामजि कर्मचारी युनियन संघद्धारा विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान 1126
पर्वतका गणेश तिमिल्सिनाको नख्खु जेलदेखि राष्ट्रियसभा अध्यक्षसम्मको यात्रा 1347
पर्वतका साँसद नेत्रनाथ सभामुखमा निर्विरोध, लम्साल मन्त्री होलान त ?? 892
पर्वतका साँसद नेत्रनाथ बन्ने भए प्रदेश ४ का सभामुख 854
राप्रपा पर्वतद्धारा दृष्टिबिहीन विद्यार्थीलाई सञ्चारसामाग्री सहयोग 756
‘गाउँ छोडेर शहर छिर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नपर्छ’ –सांसद गिरी 952